Saturday January 18, 2020 - 14:33:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qarax aad u xooggan ayaa maanta ka dhacay halka loo yaqaano Bood-Boodka oo ku yaalla duleedka degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose waxaana lala eegtay shaqaale Turki ah iyo maleeshiyaat Soomaali ah oo ilaalo u ahaa.
SAWIR: Goobta Camaliyadu kadhacday
Qaraxan oo ahaa camaliyad Istish-haadi ah ayaa lala helay goob ay ku sugnaayeen shaqaalaha Turkiga iyo maleeshiyaatkii ilaalada u ahaa waxaana la sheegay in halkaas uu ka dhashay khasaare aad u xooggan.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyada weerarka iyadoo xaqiijisay in uu qaraxaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray shaqaalaha ajaanibta iyo maleeshiyaatkii la socday.
Warar xog ogaal ah oo aan helnay ayaa sheegaya in goobta uu qaraxu ka dhacay ay ku sugnaayeen shaqaale gaaraya ilaa 6 ruux oo Turki ah iyo tobanaan maleeshiyaat Soomaali ah waxaana lagu soo waramayaa in 4 kamid ah shaqaalaha turkida uu soo gaaray dhaawacyo aad u daran.
Gawaari dhowr ah oo isugu jirta gaadiid gaashaaman iyo kuwa ciidan oo yaalay goobta ayaa si ba'an ugu burburay qaraxa sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo qaaday halka uu qaraxu ka dhacay.
Wasaaradaha gaashaandhigga iyo caafimaadka dowladda Turkiga ayaa war ay soo saareen ku xaqiijiyay in muwaadiniin Turki ah ay waxyeello daran kasoo gaartay qaraxii lagula beegsaday duleedka degmada Afgooye, Al Shabaab ayaa horay u sheegtay in ay beegsanayso saraakiisha Turkiga ee Soomaaliya ku sugan kuwaas oo qeyb ka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay.
Dowladda Turkiga ayaa saldhig melleteri oo aad u weyn ka furatay Muqdisho halkaas oo ay tababarro kusiinayso kumanaan maleeshiyaad Soomaali ah iyadoona ciidamada halkaas lagu tababaro ay duullaan ku qaadaan wilaayaatka Islaamiga ah ee shareecada islaamka lagu maamulo.
Jawaasiis Reergalbeedka ubasaasayay dhaqaalaha Turkiga oo gacanta lagu dhigay.
Iiraan oo sheegtay in Cunaqabateyntii hubka laga qaaday.
Qarax askar lagu dilay oo ka dhacay deegaan katirsan Sh/dhexe.
Qaraxyo iyo weerar 7 Askari lagu dilay oo ka dhacay gobolka Hiiraan.